जनज्योति माविको लागि बिद्यालयकै एक शिक्षकबाट रु ३ लाख २५ हजार सहयोग ! – ebaglung.com
२०७५ फाल्गुन १, बुधबार ०४:४९	Top News, थप समाचार
कमल पौडेल गुल्मी २०७५ फागुन १ । जनज्योती माध्यमिक विद्यालय मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. १ को लागी विद्यालयका शिक्षक ढाल वहादुर रायमाझीले रु ३ लाख २५ हजार ५ सय ५५ सहयोग घोषणा गरेका छन् । विद्यालयको स्वर्ण महोत्सव तथा नवाह धनधान्यान्चल ज्ञान महायज्ञको अवसर पारेर सो रकम चन्दा घोषणा गरेका हुन् ।
विद्यालयको स्तरवृद्धिको लागी भन्दै विद्यालयले आज फागुन १ गते देखि ९ गते सम्म श्रीमद्भागवत धनधान्यान्चल महायज्ञ गर्न लागेको हो । हाल सम्म विद्यालयको लागि झण्डै ५० लाख सहयोग वचन प्राप्त भएको र महायज्ञको लागि आवश्यक सवै तयारी पुरा भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक इश्वरी प्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
यसै विच मंगलवार महोत्सवको पूर्व सन्ध्यामा मोटरसाइकल र्याली निकालिएको छ। कार्यक्रमको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. १ का अरेवा देखि बागलुङको खर्वाङ हुँदै मुसिकोट नगरपालिकाकै वामीटक्सार भुवाचिदी हुँदै पुन बागलुङको भिमगिठे पुगेर विद्यालयमा फर्किएको छ।
र्यालीमा वडा अध्यक्ष तथा मुल समारोह समितिका संयोजक पूर्ण वहादुर हितान, विद्यालय व्यावस्थापन समितिका अध्यक्ष भुपेन्द्र रायमाझि, विद्यालयका प्रधानाध्यापक इश्वरी प्रसाद आचार्य सहित विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी, स्थानियहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
यति वेला पौंदी अरेवा क्षेत्रलाइ दुलही झैं सिँगारिएको छ । आज प्रदेश नं. ५ का भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री वृजेश चौधरीले उद्घाटन गर्ने विद्यालयको प्रधानाध्यापक इश्वरी प्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । कार्यक्रममा विश्व विख्यात श्रीमद्भागवत कथा प्रवक्ता बालयोगेश्वर महाराजजीले प्रवचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
२०१६ सालमा स्थापना भएको विद्यालय २०४५÷४६ सालमा निमावि तह तथा २०६६ साल देखि माध्यमिक तहमा संचालन हुँदै आएको छ ।
विद्यालयमा प्रावि तहको ४ स्थायी दरवन्दि १ राहत र निमावि तहको ४ दरवन्दि रहेको छ। हाल विद्यालयमा १८ जना शिक्षक तथा २ सय ७५ जना विद्यार्थी रहेका छन्। हिरक महोत्सव तथा महायज्ञमा राशी अनुसारको सम्मान गरिने विद्यालयले जनाएको छ ।